Kooxda (ma) laga xado dhib ah! | Holmbygden.se
Posted on 10 January, 2014 by Holmbygden.se
Inta ay sugeyso dhib barafka waa in loo daayo hadda waa dhib uppskottad ah ee Church Bay leh baraf kaamil ah!
Ujeedada haatan waxaa lagu nasakhay! Nasiib wanaag, ma la xaday, laakiin mararka amaahatay xaaladaha ay gacanta ku.
Mid ka mid ah målburarna at Anund Manor School u muuqataa in ay la xaday! news Tani murugo la helay shalay booqasho ku dugsiga. mid ka mid kaliya ee baqashada ah, ku saabsan qodobada sare, waxaa markaas ka tagay. Waxaa waa calaamad muujinaysa no dhow ee la waayay markii, laakiin ay u badan tahay in dhawaan December-January.
WAA jirtaa cid og yahay wax ku saabsan this?!
hoos Comment ama nala soo xidhiidh!
Degmada Sundsvall ma biyo dheeraad ah Holm
sanad kale qaaday degmada Sundsvall oo aan war qof dhib lama filaan ah saaray i Anundgård. Waxaa muuqata dheeraad ah loo baahan yahay meelo kale. Sanadkii la soo dhaafay, waxay Uma aan malaynayn biyo baraf, laakiin ka dib markii uu cadaadis kala kulmay #ShepherdsHut iyana way yeeleen si kasta.
Sannadkan, degmada ayaa mar kale aan la qorsheeyey in ay qabanqaabiyaan dhib baraf ah ku Holm oo dhan. HBU ayaa haatan mar kale la xidhiidhay degmada Sundsvall oo ku dhawaaqay in aannu u maleyso inay tahay xad gudub ku dureeri oo waa in ay sidoo kale hoos u this nala. lacagta Tax xataa dadka Holm waana niyad jab in si dhib leh adeeg kasta uma muuqato in ay dib ugu noqdaan baadiyaha.
HBU ayaa haatan wada xaajooday xal u this. faahfaahinta la qodbay, laakiin gaaban, taas macnaheedu waa in degmada ay hubisaa in ugu yaraan baraf diyaar. Haddaba, waxaan nafteena yeelan doonaan in ay sii socda. Xalka in aan loo baahan yahay in meelo kale ee degmada, laakiin sida muuqata lagama maarmaan ah si aad u hesho kaliya our baraf Canugii. dhib ayaa bilaabi doona bafinayo yar!
xubnaha HBU ayaa mahad badan ayaa ka dhigaya suurto gal ah dhib ah ee xilliga qaboobaha!
Markaas our urur waa codsato deeq dayactirka ah ee dhib ah, waa in aan aqoonsado xubnaha our in codsiga. Sidaas darteed, waxaan ku tusi karin waxa badan Holmbor waxay ka dambaysaa codsi u leedahay in dhib baraf ah ku Holm. HBU dhanba jeclaan lahaa in la yidhaahdo waa weyn ah mahadsanid qof walba oo dhawaan ku biiray HBU ka hor 2014 iyo waqti isku mid ah oo noo ogolaadaa in ay dhib baraf ah sanadkan!
dhib Taageero iyo aad ula HBU! dheeraad ah oo ku saabsan xubin ka mid ah HBU noqday Baro kaliya femtiolapp a.
(“Ku biir Hadda” helay inta lagu guda jiro “xiriirka” in menu.)
sidoo kale caweyska dhib 2014?
HBU qorshe ay ku soo celiyaan dhacdo caan ah oo sannadkii hore la ice-caweyska jiilaalka. Waxa suurto gal raacay “fiidkii baar” la trubadur-Mike. Waxaan macluumaad badan oo ku saabsan this soo laaban doonaa. Read iyo sawirrada ka aragto fiican ka sanadkii la soo dhaafay ee baraf-caweyska